Admin on 13th December 2010, 08:28
တစ်ခုသောနေ့လည်ခင်းတွင် လွန်စွာမှအလုပ်များနေသူတစ်ဦးထံသို့ သူ၏မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အလည်လာမိရာ . . .
KZO: ဟာဆရာဟန်သစ်ငြိမ်ပါလားဗျ၊ ခင်ဗျားသိလားကျုပ်အခုအလုပ်အသစ်ပြောင်းလုပ်နေပြီဗျ၊
HTN: ဟောဗျာ ဘာအလုပ်တုန်း၊ မကောင်းမှုတွေမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ ခင်ဗျားကတိပေးထားတယ်နော်။
KZO: ဟာဗျာဆရာကလဲ အခုလုပ်နေတာက ကားပွဲစားကုမ္ပဏီပါဗျာ၊ ကားတွေကိုယ်တိုင်ရောင်းတယ် ၀ယ်တယ် သူများကားတွေကိုလည်း လက်ခံရောင်းပေးပြီး ပွဲခယူတယ်။ မကောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး၊ ကုမ္ပဏီကအခုမှစထောင်ထားတာ၊ အဲဒီတော့ website မှာကြော်ငြာဖို့အတွက် Animation လေးတစ်ခုလုပ်နေတယ်။
HTN: တယ်ဟုတ်ပါလား ကျုပ်ကိုလည်းပြပါဦး၊
KZO: အခုသုံးချင်တဲ့ပုံတွေ Layout ချပြီးသွားပြီ၊ Animation လုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။ ဒီမှာ (download sample file here) အဲဒီ File ကိုဖွင့်လိုက်ရင် back, car1, car2, car3 ဆိုပြီး Layer လေးခုတွေ့ရမယ်။ ပထမဆုံး car1 ဆိုတဲ့ Layer ကို Duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ၊ ပြီးရင် car1 copy ဆိုတဲ့ Layer ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ Layer တွေကိုခဏ ဖျောက်ထားလိုက်မယ်။
HTN: ဘာလို့ဖျေက်တာတုန်းဗျ ဒီအတိုင်းဆက်လို့မရဘူးလား
KZO: ဒီတိုင်းမဖျောက်ပဲထားလဲ ရပါတယ်ဗျ၊ မျက်စိထဲရှင်းအောင်ပါ။ ပြီးရင်အဲဒီ car1 copy ဆိုတဲ့ Layer ကို Filter>Blur>Motion Blur ပေးလိုက်ပါမယ်။ Setting တွေကတော့ Angle: 90 နဲ့ Distance: 50 ပေးလိုက်မယ်၊ အခုဟာက ကားလေးကို အပေါ်အောက်သွားပြီး ပျောက်သွားတဲ့ စတိုင်မျိုးလိုချင်တော့ Angle ကို အပေါ်အောက်သွားတဲ့ 90 ပေးရတာဗျာ၊ Distance ကတော့ ကြည့်ကောင်းတဲ့ အနေပေါ့ဗျာ။
KZO: အခု car1 copy Layer ကို Motion Blur လုပ်ပြီးသွားပေမယ့် အောက်ခြေက စာသားတွေကို Blur ရဲ့ Area တွေမပါလာအောင် Marquee သုံးပြီး အခုလို Selection လုပ်ပြီး ဖျက်လိုက်မယ်ဗျာ။
KZO: ကျန်တဲ့ car2, car3 Layer တွေကိုလည်း ဒီအဆင့်တွေအတိုင်းပဲ Duplicate လုပ်ပြီး Motion Blur Filter ပေးလိုက်ပါဦး၊ အဲဒီနောက် အောက်ခြေစာတမ်းကို လာထိရင်ဖျက်လိုက်တာပေါ့၊ ဒါဆိုရင် Layer စုစုပေါင်း ၇ ခုဖြစ်သွားပြီ။ back Layer ကိုပဲ Visible on ထားပြီး ကျန်တဲ့ Layer တွေကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်။
KZO: အခု Photoshop ကလုပ်ထားတာတွေပြီးတော့ ImageReady ထဲကိုသွားရအောင် (Ctrl+Shift+M)။ Animation Palette ကိုကြည့်ရင် Frame1 ကိုတွေ့ရမယ်၊ အဲဒီ Frame မှာ back, car1 ဆိုတဲ့ Layer နှစ်ခုကို visible on ထားပြီးကျန်တာတွေကို ပိတ်ထားလိုက်ပါဦးမယ် Frame duration ကတော့2sec ထားလိုက်မယ်။
KZO: ပြီးရင် New Frame တစ်ခုထယူပါဦးမယ်၊ အဲဒီ Frame မှာတော့ car1 ဆိုတဲ့ Layer ကို Move tool နဲ့ အပေါ်နဲနဲတိုးပေး လိုက်မယ်။ နောက်တစ်ခါလဲ New Frame ထပ်ယူပြီးတော့ အဲဒီ car1 Layer ကိုပဲ နောက်ထပ် အပေါ်နဲနဲ ထပ်တိုးပေးမယ်။
HTN: ဟာခင်ဗျားလုပ်မှာကို ကျုပ်ရိပ်မိပြီ Layer တွေအေက်ဆင်းပြီးပျောက်မသွားခင်အပေါ်ကိုနဲနဲတိုးပြီးမှ အောက်ကိုဝင်ပျောက်သွား ဟုတ်တယ်မှတ်လား။
KZO: ဟုတ်ပါ့ ဒီပုံစံလိုမျိုးဗျ။
KZO: အဲဒီအစီအစဉ်အတိုင်းပဲ ကျန်တဲ့ Layer တွေကိုလည်း လိုက်လုပ်ပေးမယ်ဗျာ၊ ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဖြစ်မယ်။
KZO: ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ File>Save Optimized လုပ်လိုက်ရင်၊ ကျုပ်ရဲ့ ကားကြော်ငြာလေးကို ဒီလိုမြင်ရပြီလေဗျာ
HTN: ဟာမိုက်တယ်ဗျာ၊ ခင်ဗျားကုမ္ပဏီအတွက် ကြော်ငြာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဗျာ။ ဒါမှခင်ဗျားကားတွေ များများထွက်မှာ
KZO: ခင်ဗျားရော ကားလေးတစ်စီးလောက်ဝယ်ပါဦးဗျာ ကျုပ်ဒီနေ့ဈေးဦးပေါက်လေးရချင်တယ်။
HTN: ဟာ . . . ကျုပ်ကားမလိုအပ်သေးဘူးဗျာ။
KZO: ခင်ဗျားအတွက်မဟုတ်ဘူးလေ ကိုမျိုးဟိန်းဇော် မင်္ဂလာဆောင်မှာ လက်ဖွဲ့ဖို့ပြောတာ . . . . . . . . + - * / + . . . ။
ဤသို့ဖြင့် ပွဲစားကြီးကျော်ဇင်ဦး၏ ကုမ္ပဏီသည်ဈေးဦးပေါက် ကားအရောင်းတည့်သွားလေတော့သည်။